I-Bentley Imephu V8i Utshintsho ngo-2011-Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/I-Bentley Imephu V8i Iinguqu kwi-2011
Geospatial - GISezintshaMicrostation-Bentley
Nge-7 ka-Epreli, iBentley ibambe inkomfa ekwi-Intanethi, apho ibonise iimveliso zommandla we-geospatial owenziwe kwindawo ebizwa ngokuba yi-Bentley Map (Khetha uthotho 2). Umsitho wawukhokelwe nguRichard Zambuni, uMlawuli weNtengiso weHlabathi kwindawo ye-geospatial kunye noRobert Mankowski, Usekela-Mongameli woPhuhliso.
Izinto ezinokubakho ngokusekwe kwizibonelelo uBentley akholelwa ukuba zinikiwe: isixhobo se-GIS ngokuchaneka kwe-CAD, ukudityaniswa ngokuthe ngqo kwimigca yobunjineli, ukuxhasa ngokwendalo uninzi lweefomathi zevektha, ukunikezela kubhabho kunye namandla e-3D Cities.
Utshintsho kwinto esiyibonileyo kule minyaka mibini idlulileyo lubalulekile. IMapScript kunye neCadastre ziyanyamalala kwaye ziyinxalenye yeMephu yeBentley, ngelixa iPowerMap ibonakala inciphisa amandla ayo kwiPowerView kwaye umgca omtsha weshishini uvela ngokutshaya okuphezulu.
Ngokukodwa umgca ushiywe ngemveliso emithathu ephezulu:
I-version elula ebizwa ngeBentley Imephu PowerView,
Igama elipheleleyo elibizwa ngeBentley Imephu V8i
Kwaye umgca woshishino othiwa iBentley Map Enterprise V8i
Ngaphezulu okanye ngaphantsi koko ndikulindele kwiingcinga zam, nangona ndinethemba lokucacisa amanye amathandabuzo kwi-BeTogegher. Makhe sibone ukuba yintoni umahluko okhoyo kwaye yiyiphi imveliso yelifa Ziquka:
Bentley Imephu PowerView V8i
Ifana nohlobo olufana nePowerMap eyaziwayo, kodwa ngexabiso eliphantsi. Unokwenza iimephu, uhlele idatha ye-xfm, funda i-Bentley I-iimodeli, ungenise idatha yendawo, ulayishe iiraster racks, wakhe usetyenziso kwi-API.
Le nguqulo isekela iMarkup, into efana neyiphi i-Redline esetyenziselwa ukuhlaziywa kwangaphambili. Andikwazi ukuyiqonda ngoku ngokubizwa ngokuba yiyo: Ilayered "For MicroStation" Ufakelo obonakala ekhubazekile kule nguqulo.
Mapping limited imodeli DGN enye nangona ndenze icebiso ukutsiba le close kwaye uhlele iinkcukacha ngaphakathi spaceport lufuna-mvume Umncedisi Geospatial ukulubaleka Oracle Spatial isinxibelelanisi.
Siyaqonda ukuba ngale nguqulo iya kuba yinto enokwenziwa yiPowerMap, nangona ndiza kulinda ukulanda enye kwaye ndiyivivinye kuba kubonakala ngathi kukho izinto ezimbalwa ezinciphileyo nangona kungenjalo. Nangona inokuphuhliswa koku, kuya kufuneka ibonwe ukuba zeziphi iimeko uMlawuli weGeospatial kwaye ingakanani iMicrostation efakiwe kubuchule bayo bokuhlela i-vector.
Bentley Imephu V8i.
Le nguqulo, ukongeza kubuchule bePowerView, ixhasa ukuthunyelwa kwedatha kwiimodeli ze-I kunye nezinye iifomati ze-geospatial, ukuhlelwa kwedatha ngokwendawo. Le nguqulelo ixhasa imodeli ye3D, nangona ikwii-vector layer kwaye inokuguqula iilebheli kwizichazi.
Ingumnana kakhulu wale nguqulelo, kukuba iCadastral Mapping Configuration idibeneyo kwiphakheji, kunye nento eyaphelayo Bentley Cadastre kwaye inkqubo iquka ukutshaya okulungileyo kokulawulwa kweengongoma ezininzi, ukusebenzisana neenkcukacha zeCOGO kunye nezixhobo zokuhlela izicwangciso.
Esinye isixhobo esidityanisiweyo kukuGqitywa kweMephu ePhambili, okanye into esasikade siyazi njengeMephuScript. Inemisebenzi eliqela yokuphatha ushicilelo phantsi kwendlela enomdla, ibandakanya iziphumo ezihle kakhulu ezinje ngokukhanya kunye nokulawulwa kwemodyuli yeposti yokubhala kunye nolawulo olukhulu lokuyithumela kwiPDF.
Olunye usebenziso olukhulu olwakhelwe-ngaphakathi kukongezwa kwe-FME, onokusebenzisana nayo phantse nayiphi na ifomathi yedatha kunye nedatha yendawo. Enye yezona zinto zibalaseleyo endizibonileyo ngokubhekisele ekusebenzisaneni, ndisazi ukuba i-FME iya kuba yenye yezona ziphumo ziphambili apho siza kubona i-CAD kunye ne-GIS zidibana zibe yinto enye.
Imiyalelo emininzi idibeneyo, enye intsha kunye nezinye iguqulwa, njengokuhlukana kweenkqubo kwiFence kunye nokuhlela kwedatha ye-raster enethemba lokuba ndiyibuyisela kwelinye iposi.
I-Bentley Imephu ye-Enterprise V8i
Le nguqulo yenzelwe iinkqubo zokutshaya eziphezulu. Kubandakanya ukubhalwa kwemodeli kwiimodeli ze-3D, i-DEM, isalathiso, ukubonisa kunye nokuhlelwa kwamanqwanqwa e-raster kwisalathiso se-Oracle, uhlalutyo lomhlaba kubungakanani obu-3 bokuhamba kokuthatha izigqibo.
Ukusuka koku, mhlawumbi kungekudala sizakubona iiprojekthi zedolophu ezi-smart ze-3D ngeeprojekthi zaseCanada naseDanish. Kwinqanaba leemarike zaseSpain, zininzi izinto ezisisiseko zokusombulula ukucinga malunga nokusetyenziswa kolu hlobo lweprojekthi; mhlawumbi eBrazil okanye kwelinye lamazwe apho iiCharter Cities zonyuselwa khona sinokubona okuthile.
Ngokubanzi, kubonakala inyathelo elincamisayo kwiBentley, xa ushwankathela imveliso eyahlukileyo kwintsimi ye-geospatial kwizinto ezintathu ezinokutsha: Ukukhanya okunye, okupheleleyo kunye nolunye u-astral.
I-Bentley Imephu isofthiwe ephakamileyo yeeprojekthi ze-geospatial, enekhono elidlulileyo kwabanye abaninzi ukhuphiswano.
Utshintsho kungabikho xesha luchaphazela ingcamango yeenkqubo zangaphambili, akukho zifomathi ezintsha, kodwa zidibanisa izicelo ezibe ziyimfuneko kwi-GIS amandla e-Bentley Imephu.
Nangona kunjalo, iyaqhubeka nokusetyenziswa kwindawo elungileyo kuphela kwintengiso apho iBentley inamandla khona, ikakhulu kubuNjineli boLuntu kunye nezoShishino kwaye, kwiimarike ezinkulu kakhulu (eUnited States, kwamanye amazwe aseYurophu, eIndiya, eBrazil) ukunika imizekelo embalwa. Ngayo yonke into kunye nokunyaniseka okuphunyezwe ngabasebenzisi bolu hlobo, isikhundla sayo siphantsi kwinqanaba labasebenzisi be-CAD xa kuthelekiswa nabasebenzisi be-AutoDesk; Ngelixa kwindalo ye-GIS, ngokubandakanya ezinye izicelo inenqanaba lokhuphiswano oluncinci ngokuthelekiswa ne-AutoDesk kodwa iyaqhubeka iphantsi kakhulu xa ithelekiswa ne-ESRI.
Siyazi, ziimarike ezahlukileyo kunye neendlela ezahlukeneyo zokudityaniswa kwamaqonga. Ngelixa i-AutoDesk kutsha nje ixhaphaze intengiso yoyilo kwaye izama ukudibanisa imephu kunye nezoBunjineli, i-ESRI ihlala inyulu ye-GIS, iBentley ibeka phambili ubuNjineli kwaye njengokudityaniswa kuye kwangena kwi-GIS kodwa kugxilwe kubathengi bayo abakhoyo.
Le meko, ngokuveliswa kweenzuzo ezaneleyo kunye nokumiselwa kwezihlobo kufaka iingcango ekuhlaleni imimandla yangaphandle.
Kwimeko ye-Bentley, kufuneka iqatshelwe, ukuba ngokwamandla, iBentley Imephu inamandla okwenza phantse nantoni na ngokudityaniswa okukhulu kuphuhliso lwewebhu, iiprojekthi zobunjineli, ezothutho, izityalo kunye neendlela zeBIM. Kodwa ngeenjongo zomsebenzisi we-novice, ukuthenga iMephu ye-Bentley kwiwebhu, ukuvula ibhokisi, incwadana yemigaqo, ukufaka kunye nokufuna ukwenza iprojekthi akukho lula kakhulu, kwaye akukho zinto zininzi kwi-Intanethi apho unokufumana khona imizekelo ephucukileyo onokuzikhokela ngayo. Uqeqesho olusesikweni noncedo luyafuneka, luyaqondakala kodwa ikwangumqobo ekukhuleni kwale software kubasebenzisi abatsha abasetyenziselwa isoftware yasimahla okanye yokuthengisa.
Ngale ndlela, siza kubona ngakumbi ukukhula kwabasebenzisi be-GIS yasimahla kuneMephu yeBentley. Nangona kwinqanaba lenkampani, iiprojekthi ezinkulu ze-cadastre, iifemu zobunjineli ezifuna ngaphezulu, iBentley Imephu yenye indlela ebalaseleyo.
I-Geofumadas: Uhambo olude kwiifoto ze-8
Vula izixhobo ze-CAD, izixhobo zokuhlela ze-gvSIG